Sezvamunoziva zvose, Venice ndiro guta kupfuura oga unofadza yose Europe, kana kwete nyika. The vokuItaly vakariita zvachose kubva canal ndima diki, zvose izvo nhema pachitsuwa. Izvi yachinja kweguta rimwe…
France musha zviuru zvinokwezva. Kubva iconic Eiffel Tower muna Paris kusvika pebbled mahombekombe ose Nice, nyika nezvinhu kusingaperi kuita. Asi chii kana uri kushanyira ari layover, kana iwe kare achiongorora kubva hotera yako…
Europe unobereka uye unopisa chisinganzwisisiki mari kofi, ine yakanakisisa kofi zvitoro uye cafes mu Europe. Chinhu vanoda kofi mecca uye zvakajeka, kwazvo kupfuura chete kuti. Cafe tsika chinhu hwindo kunyika. Titsvake…
Amsterdam iguta yakaisvonaka kushanya. Pane zvakawanda kuona uye kuita pano kuti zvimwe Haumbomuki wakangosuruvara. zvisinei, Zvaizova vachiri zvikuru kusanganisa zvinhu. Izvozvo nokuti Amsterdam iguru pokutangira anoverengeka zvinoshamisa…
Eco kufamba noushamwari iri nechemberi dzedu sezvo isu kupinda gumi itsva iyi. With kwezvakatipoteredza kurovedzera akadai Robert Swan uye Greta Thunberg, shoko kunyika iri nokudzikinurwa pamwe sekristaro zvakajeka. Tiri vachimhanya kubva nguva…
Florence chinhu chinoshamisa nzvimbo mutsigiro pane matani kuita. asi, kana muchitsvaka kuti asingashumbi mberi guta rino, tine iwe akafukidzwa. Kune dzimwe nzvimbo zvinoshamisa kuti kushanya kuti dzinongova chitima kukwira kubva Florence. pano…